Manchester United oo bilaw fiican samaysay - BBC News Somali
Manchester United oo bilaw fiican samaysay
17 Agoosto 2010
Image caption waxay ka mid yihiin laacibiinta Manchester United guusha u keenay.
Kooxda Manchester United ayaa si aad u wanaagsan ku bilawday ciyaarteedii ugu horreysay ee tartanka horyaalka kubadda cagta Ingiriiska kaddib markii ay si sahlan uga adkaatay kooxda New Castle oo iyadu hadda uun ku soo biirtay tartanka horyaalka kaddib markii ay ka soo gudubtay kooxaha heerka 2aad.
ciyaartan oo ka dhacday garoonka ama minanka kooxda Manchester ee loo yaqaan Old Trafford, waxay ku dhammaatay saddex iyo eber ay si xarrago leh ugu badisay Manchester United. goolasha Manchester waxaa kala dhaliyay Berbatov, Flecher iyo Ryan Giggs.
Kooxda New Castle fursaddii ugu fiicanayd ee ay heshay waxaa ka khasaariyay Andy Carroll kaddib markii uu goosha dhinac mariyay kubad uu keligiis madaxa la helay meel afar tallaabo oo keliya u jirta goosha manchester.
tababaraha manchester Sir Alex Ferguson waxaa uu si weyn u ammaanay laacibka Paul Scholes oo kooxdiisa dhexda uga ciyaara oo isagu xalay ahaa maskaxda ka dambaysa goolasha ay Manchester dhalisay.